भागरथी हत्यामा शंकास्पद सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति को हुन् ? « Ok Janata Newsportal
भागरथी हत्यामा शंकास्पद सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति को हुन् ?
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या भएको आज १७ दिन पुग्यो । प्रहरीले क्लोज रिङ बनाएर हत्या अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि हालसम्म हत्यारा पक्राउ पर्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी घटनास्थलमा बसेर अनुसन्धानमा सक्रिय बनेका छन् । अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट प्रहरी टोली दोगडाकेदार पुगेको छ । हत्यास्थलबाट भागरथीको मोबाइल भेटिएकोले अनुसन्धानमा सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले अहिलेसम्म दुईजना व्यक्तिलाई उच्च निगरानीमा राखेको बताएको छ । यद्यपि अनुसन्धान भइरहेकोले उनीहरुको नाम गोप्य राखिएको छ । प्रहरीले उनीहरुका हाउभाउ र बानीको अध्ययन गरिरहेको छ । प्रहरीले घटनामा स्थानीय व्यक्तिकै संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
भागरथीको हत्या प्रकरणमा डिएनए पनि महत्वपूर्ण क्लू बनेको प्रहरीके दाबी छ । यतिबेला उनको भेजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइसकिएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यक्ति भागरथीको हत्या भएकै दोस्रो दिन भारत गएका छन् भने एकजना स्थानीयस्तरमै सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेका छन् ।